WATAAC: “Tartanka runtii wuxuu ahaa mid aad u kulul, waxaana soo gaarnay kaalin wanaagsan” | Somchess.net
You are here : Somchess.net » Sawirada » WATAAC: “Tartanka runtii wuxuu ahaa mid aad u kulul, waxaana soo gaarnay kaalin wanaagsan”
WATAAC: “Tartanka runtii wuxuu ahaa mid aad u kulul, waxaana soo gaarnay kaalin wanaagsan”
Posted On Monday, January 18, 2016 By admin. Under Sawirada
Magaalada Mahe ee wadanka Seychelles waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaarta Chess-ka ee dhallinyarada dalalka Afrika 2015-ka, iyadoo kooxaha ka qeeyb galay ay ka mid ahaayeen ciyaartoy ka socotay xiriirka Shataranjiga Soomaaliya.
Tartankaani ayaa mudadii uu socday waxay kooxaha ka socday dalalka Afrika soo bandhigeen ciyaar wanaag heerkiisu sareeyo, waxaana kaalinta koowaad galay Angola, halka kaalinta labaad ciyaartoyda ka socday dalka Egypt.
Ciyaartoyda ka socotay dalka Soomaaliya waxay galeen kaalinta lixaad, iyadoo dalal marka la eego kaalinta ay galeen ka dhigan tahay mid aan laga fileyn, bacdamaa ay ka hooseeyaan kooxo kale oo ka socday dalalka Afrika.
Ciyaartoyda magacyadoodu kala yihiin: 1- Ali Abdullahi Farah iyo 2-Mohamud Hussein Ali ayaa la ciyaaray kooxaha ka socday dalalka Afrika, iyagoona ay ka badiyeen, isla markaana iyagana laga badiyay.
Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Axmed Xasan Cabdi (Wataac) oo hoggaaminayay ciyaartoyda ka qeyb galay tartanka African Ches Championship 2015-ka ayaa ka warbixiyay tartankaasi.
“Tartanka runtii wuxuu mid aad u kulul, waxaana soo gaarnay kaalin wanaagsan oo aanan fileyn” ayuu yiri Guddoomiye Wataac oo sheegay in ciyaartoyda Soomaaliya ay soo bandhigeen qaab ciyaareed wax badan uga duwanaa kooxihii ay la ciyaarayeen.
Ma aha markii ugu horeysay oo xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ka qeyb galo tartamada kooxaha Chess-ka ee ka dhisan dalalka Caalamka, wuxuuna Guddoomiyaha xiriirka sheegay inuu halkaasi kula kulmay madaxda xiriirada heer caalami iyo heer qaaradeed, isla markaana kala hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa ciyaaraha Chess-ka.
« Soomaaliya oo ka badisay Marocco tartanka African Chess Champion ee ka socda Seychelles
Somalia appreciates CAF for FA president’s Award »